AQOONTA | Radio Wadani News
Home » AQOONTA
RadioWadani- Aqoontu waxa ay leedahay qaybo kala Duwan marka laga eegayo dhinacyo kala duwan. Hadii aynu ka istaagno dhinaca aqoonta ay inta badan u naqaano ta ah seeska iyo aasaaska nolosha ee marka uu ilmuhu yaryahay u bilaabanta ayaa waxa ay leedahay heerar kala duwan oo isdaba taxan. Kuwaas oo kala ah aqoonta lagu barto dugsiga Quraanka, Dugsiga Hoose, Dugsiga ...
ka faa ,ideyso xigmad iyo maah maahyo wadani fm
MaahMaah MAAN QABOW MA MARANTIDEE IGA HANO MURTIDA Saddex saddex lama heshiiso Nin qosol badan iyo qoonsimaad badan Nin quul jecel iyo nin aan u quudhin Nin qab wayn iyo nin aan u qabin Saddex buu raggu is dher yahay Garashada waxa soo socda Wax ka qabashada waxa jooga Ka samridda waxa tegay . Saddex baa la yidhi: · Lixdan ...
RADIO WADANI FM- Saynisyahanno ayaa sheegay in ay markii ugu horreysay ogaadeen jawi (atmosphere) la mid ah kan koonkan aan ku nool nahay oo ku xeeran meere dhulka la mid ah. Waxay daraasad ku sameeyeen duni kale oo loo yaqaanno GJ 1132b, taasoo 1.4 goor ka weyn dhulka, noona jirta fogaan ah 39 sannad-iftiin. Sannad-iftiin (light year) ayaa ah halbeeg ...